သာသနာရောင် ထွန်းပြောင်လာသော အမေရိက - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
သာသနာရောင် ထွန်းပြောင်လာသော အမေရိက
မောင်မြင့် မှ July 1, 2012 8:51pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊သာသနာရောင် ထွန်းပြောင်လာသော အမေရိက မှပုံရိပ်များအား ကြည်နူး၊ဝမ်းမြောက်ရအောင် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ရခဲးလှသောလူဘဝမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနှင့် တွေဆုံ၊ကိုကွယ်ခွင့်ရသည့် မဟာကုသိုလ်ကြီးအား သိ့ရှိဝမ်းမြောက်ကာ ပီတိဖြစ်နိုင်ကြပါစေ...။ (ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ကြီးအား ပူဇော်ရန် စိန်ဖူးတော်ကြီး) (ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ကြီး မှောင်ရီပျိုးစအချိန်နှင့် ညအချိန်) သီတဂူဗုဒ္ဓ၀ိဟာရသို့ရောက်သီတဂူသာသနာပြုအဖွဲ့၏အဓိပတိ သီတဂူဆရာတော်ကြီးသည် ၂-၆-၂၀၁၂ စနေနေ့ နေ့လည်(၂) နာရီ အချိန်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဟူစတင်လေဆိပ်သို့ ဆိုက်ရောက်တော်မူသည်။ အမေရိကရှိ တပည့်များက သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း ကြိုဆိုကြပြီး တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ အော်စတင်မြို့ရှိ သီတဂူဗုဒ္ဓ၀ိဟာရသို့ ပင့်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။
(စေတီတော်ကြီး၏ ပြီးစီးမှုများကို ဆွေးနွေး) (အမေရိကန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ)(စေတီတော်ကြီး၏ အတွင်းပိုင်းတွင် ညွှန်ကြားစဉ်) တည်ဆောက်မှုအခြေအနေကို ကြည့်ရှု ဆရာတော်ကြီးသည်သက်တော် ၇၅ နှစ်ကျော်လာပေမဲ့ ခရီးရှည်ကြီး လေယာဉ်၊ ကားများ စီးလာခဲ့သော်လည်း ပင်ပန်းသည်ဟု တစ်ခါတလေမျှ မငြီး၊ လန်းလန်းဆန်းဆန်း တက်တက်ကြွကြွ ရှိလှသည်။ အော်စတင်မြို့ သီတဂူဗုဒ္ဓ၀ိဟာရကျောင်းသို့ ရောက်သည်နှင့် ဆရာတော်ကြီးသည် ရွှေစည်းခုံစေတီတော်နှင့် ဓမ္မဗိမာန်တော် တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများကို လုိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ နယုန်လပြည့် တနင်္လာနေ့ စိန်ဖူးတော်တင်ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် ကိစ္စများကို ညွှန်ကြားကာ တာဝန်အသီးသီး ချမှတ်တော်မူသည် (သီတဂူဓမ္မသဘာထဲတွင် ဘုရားဝတ်ပြုနေကြသော အမေရိကရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ) စိန်ဖူးတော်တင်လှူခြင်း
သီတဂူဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ (အမေရိက၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ အော်စတင်)ရှိ တည်ထားကိုးကွယ်အပ်သော ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ကြီး လုံးဝ ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်၍ ၁၃၇၄ ခုနှစ် နယုလပြည့်နေ့ (၅-၆-၂၀၁၂) က သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဦးဆောင်သော အမေရိကရှိ သံဃာတော်များ၊ အမေရိကရှိ သီတဂူတပည့်ဒကာ ဒကာမများက စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ စိန်ဖူးတော်ကြီးကို တင်လှူပူဇော်ခဲ့သည်။ (စိန်ဖူးတော်တင်အခမ်းအနားတွင်)(မြန်မာဝတ်စုံနှင့် အမေရိကန်လူကြီးမင်း) အောင်ပွဲအခမ်းအနား
အောင်ပွဲအခမ်းအနားအနေဖြင့် ရွှေစည်းခုံ စေတီတော်ကြီးဖွင့်ပွဲနှင့် အနေကဇာတင်ပွဲတော်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့)တွင် ကျင်းပရန် အမိန့်ရှိတော်မူသည်။ (Dear All, You all are warmly invited to Final International Great Grand Opening Ceremony of Sitagu Shwe Si Khom Pagoda on Saturday & Sunday, November 24 & 25, 2012, 8 am to9pm.) ဤနေရာ နှင့် သီတဂူဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ တာဝန်ခံဆရာတော် ဒေါက်တာ အရိယဓမ္မတို့ အီးမေးလ် မှ ကိုးကား၍ ဖော်ပြသည်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ သီတဂူစတား ၇-၆-၂၀၁၂
အမေရိကရောက် ရွှေမြန်မာတို စေတီတော်ကြီးဖွင့်ပွဲနှင့် အနေကဇာတင်ပွဲတော်၌ ပါဝင်ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ...
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ သာသနာ ရောင်ဝါ နေသို့လင်းပါစေ .
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/01/2012 05:38:00 AM
http://satekuupuyar.blogspot.com/2012/07/blog-post_8268.html Views: 243
ဘလော့အမျိုးအစား(ဘာသာရေး) Like3members like this
klash chan သည် July 15, 2012 က 11:55amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အတိုင်မသိ ၀မ်းသားမိပါတယ်ဗျာ..သာဓု သာဓု သာဓု စိုးလေး သည် July 10, 2012 က 8:48pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ သာဓု....သာဓု....သာဓုပါ။ swe သည် July 6, 2012 က 12:26pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ကြည်ညိုရအောင် တင်ပြ ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ mmt သည် July 4, 2012 က 11:12pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့အားထုတ်မှုများ သိရလို့အတိုင်းမသိ ကြည်ညိုမိပါသည်။ ၀မ်းမြောက်စွာဖြင့်၊ သာဓု..သာဓု..သာဓု.....။ Angledaewi သည် July 2, 2012 က 6:30pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ သာဓု သာဓု သာဓု wai mon သည် July 2, 2012 က 1:41pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ သာဓု..သာဓု..သာဓု..... အားလုံးကြည်ညိုရအောင်ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒေါ်ဖြူဖြူမြင့် သည် July 2, 2012 က 11:28amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အတိုင်း မသိဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယိ်။ လင်းကိုကို သည် July 2, 2012 က 10:55amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါတယ်.. thuyeinyewin သည် July 2, 2012 က 8:01amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ သာဓုပါဗျာ သာဓု... ၄၄၂ဇော်နိုင် သည် July 1, 2012 က 11:57pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ သာဓု...သာဓု...သာဓု... ‹ Previous
Top News · Everything whitecolor postedablog postလောကဓံမုန်တိုင်းများ နှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထားလောကဓံမုန်တိုင်းများ နှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား“လောကဓံမုန်တိုင်းများနှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား”…See More41 minutes ago 0
မူကြိုဆရာ posted blog posts၀ိပတ္တိတရားလေးပါးနှင့် ဗျသနတရားငါးပါး“သမ္မပ္ပဓာန် လေးပါး (တရားအားထုတ်ခြင်း လုံ့လ လေးမျိုး)”ဥပုသ် သီလ စောင့် ခြင်း ၏အကျိုး ကျေးဇူးမှာ…..3 more…1 hour agowhitecolor and အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) are now friends1 hour agomun mun aung shared dimplemit's blog post on Facebookတရားဆေးသောက် ရောဂါပျောက်1 hour agomun mun aung liked dimplemit's blog post 'တရားဆေးသောက် ရောဂါပျောက်'1 hour agoKO KO liked မူကြိုဆရာ's blog post '"ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသိထားသင့်သည့် ဘုရားဟူသည်"'1 hour agoမောင်သုည commented on မောင်သုည's blog post '၀မ်းစာ'"အမှားပြင်ချက် ထမီလေးတစ်ထည်အကြောင်းပြောသူမှာ နုနုရည်အင်းဝဖြစ်ပါသည် ( မြသွေးနီဟုမှားယွင်းဖေါ်ပြမိပါသည်…"3 hours agodimplemit leftacomment for naing"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်